Dalxiiska Kariibiyaanka ayaa weli rajo ka qaba dib u soo kabashada inkastoo Omicron cusub uu yahay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » Dalxiiska Kariibiyaanka ayaa weli rajo ka qaba dib u soo kabashada inkastoo Omicron cusub uu yahay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Aroosyada Jaceylka Malabka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Siddeed iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay, meelaha Caribbean-ka, iyada oo aan laga reebin, waxay muujiyeen adkeysigooda si ay u abuuraan xeelado dib u soo kabashada, oo ay ku daraan borotokoolka safarka ee soo noqnoqda, iyo la-hawlgalayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee dhinacyada caafimaadka iyo taageerada dhaqaalaha iyo horumarinta.
The Ururka Dalxiiska Karibiyaanka (CTO) ayaa weli ah mid wanaagsan oo ku saabsan dib u soo kabashada joogtada ah ee warshadaha dalxiiska xitaa iyada oo ay jirto hubaal la'aanta uu sababay masiibada socota.
Sideed iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay, Caribbean meelaha loo aado, iyada oo aan laga reebin, waxay muujiyeen adkeysigooda si ay u abuuraan xeelado dib u soo kabashada, oo ay ku daraan borotokoolka safarka ee la cusbooneysiiyay, iyo iskaashiga la-hawlgalayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee dhinacyada caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo horumarinta. Soo kabashada xaalad kasta, waxay dhacday iyadoo la hubinayo caafimaadka iyo badbaadada deganayaasha iyo booqdayaasha.
Sannadka 2021 waxa uu ina siiyey tilmaan ah in uu jiro iftiin dhamaadka waxa uu ahaa tunnel dheer oo bilaabmay March 2020. Bartamihii 2021, waxa aanu aragnay isbedel ku yimid hawlihii dalxiiska, iyada oo Caribbean oo dhaafa celceliska caalamiga ah ee koritaanka imaatinka joogitaanka iyo ka qayb qaadashada dalxiiska ee wax soo saarka guud ee gudaha (GDP). Intii lagu jiray rubuci saddexaad ee 2021, waxaa gobolka yimid 5.4 milyan oo dalxiis, ku dhawaad ​​saddex jeer imaatinka isla muddadaas 2020, laakiin weli 23.3 boqolkiiba ayaa ka hooseeya heerarka 2019. Warar horudhac ah ayaa sheegaya in horumarkani uu sii socday ilaa dhamaadkii rubuci u dambeeyay. Sidaa darteed, waxaa lagu qiyaasaa in imaatinka dalxiiska ee 2021 ay dhaafi doonaan heerarka 2020 60 ilaa 70 boqolkiiba.
Marka aan bilowno 2022, oo aan marlabaad la halgameyno saameynta nooc cusub oo sidoo kale si xun u saameeya socdaalka caalamiga ah, waxaan ku niyadsanahay waayo-aragnimada soo kabashada iyo casharrada laga bartay 2021.
Khibradan iyo casharradan ayaa ina baray in safarka iyo marti-gelinta ay la jaanqaadi karaan masiibada saamaysa meelaha aan u soconno iyo suuqyadayada labadaba. In kasta oo natiijooyinka ilaa hadda aanay muujin soo noqoshada heerarka 2019, natiijooyinka gaarka ah ee la diiwaan geliyay xagaaga ilaa dhammaadka sanadka 2021 waxay muujinayaan in dib-u-soo-noqosho miisaan leh ama tartiib tartiib ah ay suurtogal tahay oo ay suurtogal tahay dhammaadka 2022.